We Fight We Win. -- " More than Media ": ရိုဟင်ဂျာပြသနာ၊ လူ့ အခွင့်အရေးနှင့် အမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာ။
ရိုဟင်ဂျာပြသနာ၊ လူ့ အခွင့်အရေးနှင့် အမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာ။
ရိုဟင်ဂျာပြသနာနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုဘယ်ဆုနဲ့ မထိုက်တန်ကြောင်း လူသိရှင်ကြား စွပ်စွဲချက် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
မနေ့ ကမှဖြစ်သော ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက် နေ့ တွင် အယ်လ်ဂျာဇီးရား နိုင်ငံ တကာ ရုပ်သံလွှင့်ဌာနမှ ရိုဟင်ဂျာလူထုများ ဘ၀ပျက်နေကြသည့် ပုံများ၊ စခန်းအတွင်းနေထိုင်ရာ တွင်လည်း အကူအညီများ မရရှိ၍ စားရမဲ့သောက်ရမဲ့ ဖြစ်နေပုံ များ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်သို့ လှေဖြင့်ကူးပြေးရန် ကြိုးစားသော်လည်း အဆိုပါ နိုင်ငံရှိအာဏာပိုင်များက လက်မခံ ဘဲ ထမင်းထုပ်တယောက်တထုပ်ပေး၍ ရေထဲသို့ပြန် မောင်းထုတ်လိုက်သဖြင့် အော်ဟစ်ငိုကြွေးကာ လှေပေါ်ပြန် တက်သွားကြရသည့် ပုံများကို အချိန်အတော်ကြာ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။
တဆက်တည်းတွင် အယ်လ်ဂျာဇီးရား နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံလွှင့်ဌာနက ရိုဟင်ဂျာပြသနာကို လေ့လာလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိ သော ကုလသမဂ္ဂမှအပါအ၀င် ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ ကို အင်တာဗျူး လုပ်ပြီးတင်ပြသွားခဲ့သည်။ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ (Human Rights Watch) မှ Brad Addam က အစိုးရအာဏာပိုင်များသည် ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှစပြီး ဘက် တဘက် မှ ရပ်တည်ကာ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် ရက်စက်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း တိတိကျကျ ပြော သွားခဲ့သည်။
လန်ဒန်မြို့၌ အခြေစိုက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူ ဟု အမည်ခံထားသူ မိုဟာမက် နူး (Mohamed Nour) ဆိုသူက နိုင်ငံကြီးများသည် ဤသို့သော ကျူးလွန်မှုကြီးများကို နုတ်ဆိတ်နေကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းဝင် ၍ စီးပွားရေး နှင့် အခြားလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများ လုပ်ခြင်သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာများ အပေါ် ကိုင်တွယ်မှုများ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ အောင်ဆန်းစုကြည် သဘောတူညီပြီးဟူ၍ ဦးသိန်းစိန်က ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခဲ့ ကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာ အရေး အပေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မျက်စိမှိတ်ထားလျှက်ရှိကြောင်း၊ အောင်ဆန်း စုကြည်သည် နိုဘယ်ဆုနှင့် မထိုက်တန်ကြောင်း နိုင်ငံတကာရှေ့တွင် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် စွပ်စွဲပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
မြန်မာစကားပုံ တခုရှိပါသည်။ အပျက် အပျက်နှင့် နှာခေါင်းသွေးထွက်တော့မည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာအရေး နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ မှန်မှန်ကန်ကန် ရပ်တည်ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်း မရှိလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာမက တိုင်းရင်းသားပေါင်း စုံ လူမျိုးစုများအားလုံး နှင့် တိုင်းပြည်ပါ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းပါတော့မည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကြောင်းပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာကပိုပြီး သိလာသည်ဟူ၍ ၀င့်ကြွားနေကြသည့်အချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပင် စတင် လက်ညှိုး ထိုးခြင်းခံရကာ တမျိုးသားလုံးဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးခြုံးရမည့် အခြေအနေသို့ ရောက်သွားမှာ စိုးရိမ်မိပါသည်။ ဤ အချိန် တွင် ပြသနာ၏ အခြေအမြစ်ကို ခေါင်းအေးအေးထား၍ စေ့စေ့စပ်စပ် လေ့လာရန် လိုအပ်လာပါသည်။ အနာသိ လျှင် ဆေးရှိနိုင်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာပြသနာအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးရှုဒေါင့်မှနေ၍ နိုင်ငံတကာက စတင်ထောက်ပြဝေဘန်လာမှုများကို အဆိုးမြင် အနေဖြင့်မကြည့်သင့်ကြောင်း ဦးစွာတင်ပြလိုပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း ကြီး၊ ငယ်၊ လတ် များသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် ကျူးလွန်ခဲ့သည့်ဆိုးဝါးပြင်းထန်သော ပြစ်မှုကြီးများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ကျူးလွန်ခံခဲ့ရသော တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူထုကြီး ဘက်မှ ရပ်တည်ကာ စစ်အစိုးရအား တောက်လျှောက်ပင် ဆန့်ကျင်ကန့် ကွက် ဝေဘန်ခဲ့ ကြ သည်ကို မမေ့သင့်ပါ။
ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ ဘီဘီစီ မြန်မာ့အရေး ကမ္ဘာ့အရေးဆွေးနွေးခန်းတွင် ကျောက်ဖြူမှ ရှေ့နေကြီးတဦးလည်းဖြစ်၊ စစ်အစိုးရတည်ထောင်ထားသော လွှတ်တော်တွင် အမတ်တဦးလည်းဖြစ်သူ ဦးဘရှိန်က ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ ကို မပြင်သင့်ကြောင်းကန့်ကွက်ဆွေးနွေးရာ၌ ဥပဒေသက်သက် နှင့် ပြောလို့မရကြောင်း၊ နိုင်ငံ၏ ပကတိ အခြေအနေကို ကြည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိမ်နီးခြင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှိနိုင်ငံမှာ လူဦးရေသန်း ၆၀ မှ သန်း ၁၆၀ အထိ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံသား ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်ထဲမှာ အကြုံးမ၀င်သူများရှိလျှင် ထိုသူများမှာ မိမိတို့ ဆီ ဘာကြောင့်ရောက်လာသလဲဟု မေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးမှာ အဓိကကျကြောင်း၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကဲ့သို့သော ခေတ်မှီတိုးတက်သည့် နိုင်ငံကြီးမျိုးသည်ပင် လုံခြုံရေးကို အဓိက ထားရကြောင်း ဖြင့် ဆွေးနွေးသွားခဲ့သည်။ ဤအင်တာနက် http://youtu.be/esS0jgYGaLk တွင် ပြန်လည်နားထောင်နိုင်ပါသည်။
စာရေးသူသည် ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ အပေါ် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေနှင့် ပြည်တွင်းဥပဒေ အခြေခံများအပေါ်မှသာ ဇောင်းပေးဆွေးနွေးခဲ့သဖြင့် ဦးဘရှိန် တင်ပြခဲ့သည့် နိုင်ငံ့လုံခြုံရေး ရှုဒေါင့်မှ ဆွေးနွေးချက်ကို တုန့်ပြန်ရန် အချိန်မရခဲ့ပါ။ တကမ္ဘာလုံးက စောင့်ဆိုင်းကြည့်ရှုလျှက်ရှိသော နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနကြီးတခုက ယမန်နေ့က ရိုဟင်ဂျာပြသနာကို အတော်ပင်အချိန်ပေးကာ မီးမောင်းထိုးလာသည့်အချိန်၌ လူထုများအတွင်း မှန်ကန် သည့် အယူအဆများ ရှိလာနိုင်စေရေးအတွက် ဦးဘရှိန်၏ နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးအယူအဆကို တုန့်ပြန်ဆွေးနွေးရန် လိုအပ် လာပါသည်။ အတွေး မှန်မှ အလုပ်မှန်မည်ဟု ယူဆသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံ့လုံခြုံရေး ဟူသည်မှာ နိုင်ငံတခုကို အခြားနိုင်ငံတခုက သို့မဟုတ် အများက စစ်ပြုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတခု၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို အခြားနိုင်ငံတခုက သို့ မဟုတ် အများကထိပါးစော်ကားခြင်းဟူ၍ ယေဘုယျအားဖြင့်နားလည် ပါသည်။ ယခုအချိန်အထိ ရိုဟင်ဂျာပြသနာသည် နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်သည့်အဆင့် မရောက်သေးပါ။ နိုင်ငံ့လုံခြုံ ရေး ကို ထိပါးမှာစိုးရိမ်၍ ဟူသည်ကို အကြောင်းပြကာ ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေများ၊ ပြည်တွင်းဥပဒေများကို ချိုးဖေါက်ကျူးလွန်မှု မှန်သမျှကိုလည်း လက်မခံနိုင်ပါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာရေးရာများကို ဆက်ဆန်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပြသနာများစွာ ကြုံတွေ့ ရပြီး ပြင်းထန်သောဝေဘန်ကန့်ကွက်မှုများ မကြာမကြာခံရသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့ရာတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင် စုသည် နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးကို အဓိကထားသည်မှန်သော်လည်း နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးကို အကြောင်းပြ၍ အစိုးရအနေဖြင့် မူဝါဒ ချ မှတ်ပြီး ပြည်တွင်း၌ မိမိနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်လာသော လူမျိုးခြားကိုဖြစ်စေ၊ မွတ်ဆလင်နှင့် အခြားသာသာဝင်များ ကို ဖြစ်စေ ဆန့်ကျင်ကာ နိုင်ငံတကာလူ့ အခွင့် အရေးဥပဒေ များနှင့် ပြည်တွင်း ဥပဒေများကို ချိုးဖေါက်ကျူးလွန်သည် ဟူ၍ မကြားဘူးပါ။ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အအုံကို ဖေါက်ခွဲပြီးအကြမ်းဘက်မှုကြီး ကို ကျူးလွန်ခဲ့သော မွတ် စလင် အစွန်းရောက် အယ်လ်ကိုင်းဒါးနှင့် အိုစမာဘင်လေဒင်အား နိုင်ငံတကာထွက်၍ ပြင်းထန် စွာ အရေးယူခဲ့သော် လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့် ပြည်တွင်း၌ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာ၌ ဖြစ်စေ၊ မွတ် ဆလင် ဘာသာ ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်သည်ကို မတွေ့ရပါ။ ဦးဘရှိန်သည် နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးအယူအဆကို သက်သေထူနိုင်အောင် အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုအား ကိုးကားခြင်းမှာ အခြေအမြစ်မရှိပါ။
ရိုဟင်ဂျာလူထုများနှင့် ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြသနာအပေါ် (State Security) နိုင်ငံ့လုံခြုံရေး အမြင်ကို ကိုင်ကာ အကြမ်းဖက်သည့် နည်းလမ်း မကျင့်သုံးသင့်ပါ။ (Human Security) လူထုလုံခြုံရေး အမြင်ဖြင့်သာ ဖြေရှင်းဘို့ လိုပါ မည်။ ယင်းအမြင်ဖြင့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ရှေ့ရှုပြီး ငြိမ်းချမ်းသည့် နည်းလမ်းကို အဓိက ထားဆောင်ရွက်မှသာ အမှန် ဆုံးဖြစ်ပါမည်။ ယင်းသို့မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးအမြင် ကို ကိုင်စွဲကာ အကြမ်းဖက်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့ သဖြင့် ယခုမူ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူတရပ်လုံးတွင် လူထု လုံခြုံရေး ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ အသွင် ဆောင်သွားပြီး တဘက်ကို တဘက် မုန်းတည်းမှု များ၊ မယုံကြည်မှုများ၊ ထိတ်လန့်မှုများ ခံစား နေ ကြရပြီ ဖြစ်သည်။ ဖြေရှင်းနည်း မမှန်ခဲ့သဖြင့် မကောင်းသည့်အကျိုးဆက်များပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဤနည်းကို ဆက် လက်ကျင့်သုံးလျှင် ဘာသာရေးပဋိပက္ခ အဖြစ်သို့ ရောက်သွားနိုင်သည်။ ရိုဟင်ဂျာ သည် လူမျိုးတမျိုးဖြစ်ပါလျှက် အသိ အမှတ်မပြုဘဲထားသည်၊ အသိအမှတ်ပြုပေးရမည်ဟူ၍ ယခုအချိန်တွင် နိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုနေခြင်း၊ ဖိအား ပေး နေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ရိုဟင်ဂျာများ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံနေရသည်၊ အစိုးရကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကျူးလွန်နေသည် ဟု သာ ထောက်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် အကြမ်းဘက်သည့် နည်းလမ်းကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးခြင်းကြောင့် တဘက်နှင့်တဘက် အပြန်အလှန်သတ် ဖြတ်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားပြီး အခြားတဘက်တွင် စစ်အစိုးရ၏ဖန်တည်း ကျူးလွန်မှုများ ပိုမိုတိုးချဲ့ လုပ်ဆောင် လာ ပါကအခြေ အနေနှစ်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်သည်။
တမျိုးမှာ ငါတို့မွတ်ဆလင်တွေ ဖိနှိပ်သတ်ဖြတ်ခံနေရသည်ဟု လှုံ့ဆော်မှုများ ပေါ်လာ ပြီး တကမ္ဘာလုံးရှိ မွတ်ဆလင် များက ရိုဟင်ဂျာနောက်တွင် ရပ်တည်သွားနိုင်သည်။ ရိုဟင်ဂျာအရေးမှ မွတ်ဆလင်အရေး သို့ကူးပြောင်းသွား နိုင် သည်။ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများက ရိုဟင်ဂျာများဘက်မှ ရပ်တည်အားပေးမှုများ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်လာနိုင် သည်။ ဤ အခြေအနေသို့ရောက်သည့်အခါတွင်မှ တကယ်တန်း နိုင်ငံ့လုံခြုံရေး ထိခိုက်လာမည်။ လူထုလုံခြုံရေးမှာမူ တွေးရဲစရာ ပင် မရှိတော့။
အခြေအနေနောက်တမျိုးမှာ ရိုဟင်ဂျာများသည် လူမျိုးအဆင့်အတန်း မရထိုက်ပါဘဲလျှက် လူမျိုးအဖြစ် အတင်းတွန်း တင်သဖြင့် အစိုးရကိုယ်တိုင်က ပါဝင်ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ဤသို့ သော သတ်ပွဲကြီးများ ဖြစ်ပွားရ သည်ဟု ဆိုလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ Genocide ခေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ကျူးလွန်ရာရောက်သည်။ နိုင်ငံတကာ့အလယ်တွင် ဤသို့ စွပ်စွဲခံလိုက်ရလျှင်ပင် အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းလှပါသည်။ တကယ်ဆက်ကျူးလွန်လျှင်လည်း နိုင်ငံ တကာက တကယ်တန်း အရေးယူမှာသေချာသည်။ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ကျူးလွန်သည့်အဆင့် အထိ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်သော လူမျိုးများရှိသည့် နိုင်ငံဟု သဘောထားကာ နိုင်ငံခြားခရီသည်များကအစ ရှောင်သွားနိုင်သည်။ လူထု စီးပွားရေးဘ၀ တိုးတက်ရန် မမြှော်မှန်းနိုင်တော့။ ဤသည်မှာ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားအခြေခံမှ တင်ပြခြင်း လည်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားရေးဟူသည်ကို ဤသို့စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
စာရေးသူသည် ယခုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာ၊ ရခိုင် အဓိကရုဏ်းအပေါ် သုံးသပ်ရာတွင် သမိုင်းကြောင်းအရ ရိုဟင်ဂျာ သည် လူမျိုးတမျိုးဟုတ်၊ မဟုတ် အခြေခံမှ မချည်းကပ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ တနိုင်ငံလုံး၌​ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးကာ ဒီမိုကရေစီ စစ်မှန်စွာရရှိပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်၊ စည်းရုံးခွင့်၊ စုဝေးခွင့်များ ရမှ သာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နက်နက်ရှိုင်း ဖေါ်ထုတ် လေ့လာ အမြင်ခြင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးနိုင်ကြပြီး လူမျိုးတမျိုးဆိုသည် ကို မည်သို့ သော အခြေခံများဖြင့် သတ်မှတ်သင့် သည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကိုပါ လူထုအခြေခံဖြင့် ဖွင့်ဆိုနိုင်ကြပါမည်။ ထို့နောက်တွင် တိုင်းပြည်၏ အရေးကြီးလှသော ကိစ္စရပ်များ၌​ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူ၍ ဆုံးဖြတ်ကြရမြဲ ဖြစ်သလို ရိုဟင်ဂျာအား လူမျိုးတမျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်သင့် မသင့် ဟူသည်ကို ဆန္ဒခံယူပွဲဖြင့် ဆုံးဖြတ်၇န် လိုကောင်း လိုပါမည်။ မျက်မှောက်အချိန်တွင်မူ အတည်ပြုရန်အခက်အခဲရှိသော သမိုင်းအချက်အလက်ဆိုသည်များကို တင်ပြလာလျှင် ပုဂံ ရာဇ၀င်ကို တုတ်ထမ်း၍ ငြင်းရသည် ဆိုသကဲ့သို့သူမှန်သည် ကိုယ်မှန်သည် အငြင်းပွားမှုများဖြင့် သာ အဆုံးသတ် သွားနိုင်မည် ဖြစ်သဖြင့် အကျိုးမရှိနိုင်ပါ။
သို့ ဖြစ်၍ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် နိုင်ငံရေး (တနည်းအားဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်က ကျင့်သုံးလေ့ရှိသည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ဟန်) အခြေခံမှ ချည်းကပ်ပါမည်။ လူမျိုး (Ethnic Nationality) နှင့် နိုင်ငံသား (Citizen) တို့၏ ဆက်စပ်မှု နှင့် ကွားခြားမှု အား လွတ်လပ်ရေးရပြီးစ သမိုင်း ကြောင်း နောက်ခံမှ စတင် တင်ပြ ပါမည်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးစ အချိန်တွင် စတင်ကျင့်သုံးသော ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၁) ၌ သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း နှင့် နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း နှစ်ရပ်လုံးကို ပြဌာန်းထားသည်။
သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံ သားဖြစ်ခြင်း ပုဒ်မ (၁၁) (က) မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား တမျိုးမျိုး၏ မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူတိုင်းသည် လည်းကောင်း၊
နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း ပုဒ်မ (၁၁) (ဃ) ------ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့မှ အထက် အခြားမဲ့သော ဆယ်နှစ်အတွင်း ရှစ်နှစ်အောက် မယုတ်သောကာလ အဖို့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင် ပါဝင်လတ္တံ့သော အာဏာပိုင်နက် အတွင်း၌ နေထိုင်ခဲ့ ဘူးပြီးဖြစ်လျှင် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံအတွင်းတွင် ထာဝစဉ်နေထိုင်ရန် ကြံရွယ်ခဲ့သည်ဖြစ်၍၊ ထို့အပြင် တရားဥပဒေဖြင့်သတ်မှတ်သော အချိန်အတွင်းတွင် ထိုသို့သတ်မှတ်သော နည်းလမ်းနှင့် အညီ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသား အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းကို ထုတ် ဖေါ်သူတိုင်းသည် လည်းကောင်း၊
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အထက်ပါ ပြဌာန်းချက်ကို အခြေခံကာ သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံ သားဖြစ် ခြင်း နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေတွင် အောက်ပါအတိုင်းပြဌာန်းထားသည်။
ပုဒ်မ (၃)။ ။(၁) အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ အလို့ငှာ "မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား တမျိုးမျိုး” ဆိုသည် မှာ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ချင်း၊ မြန်မာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ သို့တည်းမဟုတ် ရှမ်းလူမျိုးကိုလည်းကောင်း၊ ၁၈၂၃ ခုနှစ် (မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၁၈၅ ခုနှစ်) မတိုင်မီ ကာလမှစ၍ ပြည်ထောင်စုတွင်ပါဝင်သော နယ်မြေတခုခု၌ မိမိတို့၏ပင်ရင်းတိုင်းပြည် အဖြစ်ဖြင့် အခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့သော မျိုးနွယ်စုများကို လည်းကောင်း ဆိုလိုသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အထက်ပါ ပြဌာန်းချက်ကို အခြေခံကာ နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ရွေးချယ်ရေး အက်ဥပဒေ တွင်အောက်ပါအတိုင်း ပြဌာန်းထား သည်။
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ခေါင်းဆောင်သည့် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ပုဒ်မ ၁၄၆ အရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံသားပြုခြင်း၊ နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းခြင်းတို့ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ဥပဒေအတိုင်း ဖြစ်စေရ မည်ဟု ပြဌာန်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပြဌာန်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် အဆင့်မှ လျှောကျ သွားပြီး အာဏာပိုင်တို့အလိုကျ ဥပဒေပြဌာန်းကျင့်သုံးသည့် အဆင့်သို့ ရောက်သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ ကို ထုတ်ပြန်ကာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ်မှစ၍ တောက်လျှောက်ကျင့်သုံးလာခဲ့သော ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ရွေးချယ်ရေး အက်ဥပဒေ ကိုလည်းကောင်း ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
ဥပဒေ နှစ်ခုကို ဖျက်ပြီး တခုတည်း ပေါင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးဆက်အဖြစ်တွေ့ ရသည်မှာ သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံ သားဖြစ်ခြင်း နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ အနှစ်သာရအရ ပြောင်းလဲ မသွားသော်လည်း ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ တွင် အောက်ပါ အားနည်းချက်ကြီးများကို တွေ့ရသည်။
(၁) မူလ ဥပဒေဟောင်းနှစ်ခုတွင် ပြဌာန်းထားသော တရားစီရင်ရေး၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး နိုင်ငံသား ကိစ္စများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ အစိုးရ၀န်ကြီးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဗဟိုအဖွဲ့တွင်သာ အဆုံးသတ်စေ သည်။
(၂) မူလ ဥပဒေဟောင်းတွင် နိုင်ငံခြားသားတဦးဦးအား နိုင်ငံသားပြုမှု လက်မှတ်ကို လျှောက်ခွင့်ပေးထားပြီး သတ်မှတ် ချက် တရပ်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား တမျိုးမျိုးကို ပြောဆိုတတ်၇မည်ဟု ပါရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံသားဥပဒေ တွင်မူ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၄)ရက်နေ့မတိုင်မီ နိုင်ငံအတွင်း ရောက်ရှိနေထိုင်သူနှင့် ၄င်းတို့မှ မွေး ဖွားသည့်သားသမီးများကိုသာ လျှောက်ခွင့်ပေးသည်။
(၃) ဥပဒေသဘောအရ ရှုတ်ထွေးခြင်း၊ မပြည့်စုံခြင်း။
ဖျက်သိမ်းခဲ့သည့် ဥပဒေဟောင်းနှစ်ခုမှာကဲ့သို့ မဟုတ်တော့ဘဲ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံသားဥပဒေသည် ရှုတ်ထွေးပြီး သာမန်လူထုများ မျက်စိလည်အောင် ပြဌာန်းထားသည်။ ဤအချက်မှာ ဥပဒေကို လက်တွေ့ဖေါ်ဆောင်သော အခါ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်းများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင် များ၏ လက်တွင်းသို့ ကျရောက်သွားစေသည်။၄င်းတို့နှင့် အလွမ်းသင့်လျှင် နိုင်ငံသားလက်မှတ်ကို အလွယ်တကူထုတ်ပေး လိုက်သည်။ အလွမ်းမသင့်လျှင် ဟိုစာရွက်တောင်း၊ သည် ထောက်ခံစာထပ်တောင်း နှင့် နှစ်ပေါင်းကြာအောင် အချိန်ဆွဲ ထားလိုက်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်အတွင်း လာဘ်ပေး လာဘ် ယူ သည် ကြီးကြီးမားမား တည်ရှိလာပြီး နိုင်ငံအတွင်း တရားဝင် မရောက်ရှိသင့်သူပေါင်း မြောက်များစွာသည် လာဘ်ငွေများအပေါ်တံတားခင်းကာ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ လွတ်လပ်သော အာရှ အသံတွင် ဆွေးနွေးထားသည့် အစီအစဉ်ကို ဤ အင်တာနက် http://youtu.be/fhgWJPFfc70 တွင် ပြန်လည်နားဆင် နိုင်ပါသည်။
လွတ်လပ်ရေးရစကရှိထားပြီးဖြစ်သော ရှင်းလင်းသည့် ဥပဒေနှစ်ခုကို ဖျက်သိမ်းကာ ရှုတ်ထွေးပြီး မပြည့်စုံသော ဥပဒေ ကို ပြဌာန်းခဲ့ခြင်း၊ ယင်းနှင့် ဆက်စပ်ကာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနယ်ပယ်တွင် တဖြေးဖြေးနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ် ယူမှု ကြောက်ခမန်းလိလိကြီးထွားလာခြင်း၊ တတိုင်းပြည်လုံး၌ လာဘ်ငွေများအပေါ်တံတားခင်းကာ တရားဝင် မရောက်ရှိ သင့်သူပေါင်း မြောက်များစွာ ရောက်လာခြင်း စသည်တို့ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ စစ်အာဏာရှင်စနစ် နှင့် အာဏာရယူအုပ်ချုပ် ခဲ့သော စစ်ခေါင်းဆောင်များတွင်တာဝန် ရှိပါသည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူပြသနာသည် န၀တ၊နအဖ ခေတ်တွင်ထိပ်ဆုံး သို့ ရောက်ခဲ့ရာ ယခုလက်ရှိ အာဏာရယူထားသူ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများအနက် တာဝန်ရှိမှုအရပြောလျှင် န၀တ အတွင်း ရေးမှုး (၂) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ယူခဲ့သည့် လက်ရှိ သမတ ဦးသိန်းစိန်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာပြသနာသည်လည်းကောင်း၊ တရုတ်လူမျိုးများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ သန်းတချို့ချီပြီးရောက်ရှိနေ ကြသည့် ပြသနာသည် လည်းကောင်း၊ ဤ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေ၊ တရားစီရင်ရေး၏ ကြပ်မတ်မှုမရှိတော့ဘဲ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ ပိုင်များက ထင်သလိုချယ်လှယ်လုပ်ကိုင်နေမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူစနစ်၊ စစ်အာဏာပိုင်များ၏ နိုင်ငံရေးအရ အသုံးချ ကစားခံ၇မှု စသဖြင့် အကြောင်းပေါင်းများစွာ ပေါင်းဆုံကာ တည်ရှိလာခဲ့သော ပြသနာဖြစ်သည်။ အရင်းခံမှာ စစ်အာ ဏာရှင်စနစ်ဖြစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးသည့် အခြေခံတွင် အာဏာကို အုပ်ချုပ်ရေးကိုင်တွယ် သူ စစ် အာဏာပိုင်များကသာ ၇လိုခြင်း၊ ရှင်းလင်းသော လည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ် မရှိခြင်း၊ တာဝန်ခံမှု မရှိခြင်း၊ ကြီးကြပ်မှု မရှိခြင်း၊ ပြည်သူလူထုတွင် မေးမြန်းပိုင်ခွင့်နှင့် သတင်းအချက်ရယူပိုင်ခွင့်ကို ဥပဒေနှင့် အညီကျင့်သုံးခွင့် မရခြင်း၊ ဥပဒေပြသနာ သာမက ဥပဒေစိုးမိုးရေးပြသနာပါတည်ရှိခြင်း အစရှိသည် တို့ ကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေအောက်တွင် နိုင်ငံသားလက်မှတ်ရယူခြင်းမှာ စစ်ခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်များနှင့် နီးစပ်သူများ၊ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများ၊ စီးပွားရေးသမားများအတွက် လွန်စွာလွယ်ကူလှသော်လည်း သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံသား မဟုတ်သူသာမန်လူထုများ၊ ငွေကြေးချို့တဲ့သူများ အတွက်အတော်ပင် အခက်အခဲ ကြီးမားခဲ့သည်။ ယင်းနှင့် ဆက်စပ်ကာ သဘာဝအလျှောက်နိုင်ငံသား စာရင်းဝင်သွားနိုင်သည့် လူမျိုးဖြစ်တည်မှုလှုပ်ရှား မှုမှာ အထူးသဖြင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစ၍ တဖြေးဖြေးနှင့် အရှိန်ယူလာခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကလည်း လူမျိုးဖြစ်မှသာ နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည့် ဥပဒေကို ပြဌာန်းလာသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄၅ ကို ကြည့်ပါ။
ပုဒ်မ ၃၄၅။ ။ အောက်ဖေါ်ပြပါ အရည်အချင်းတရပ်ရပ်နှင့် ပြည့်စုံသူများသည် နိုင်ငံသားများ ဖြစ် ကြသည်။ (က) မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားမိဘ နှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူ (ခ) ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အတည်ပြု ပြဌာန်းသည့်နေ့တွင် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီးသူ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပါ အထက်ပါ ပြဌာန်းချက်အရ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပါရှိသော နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း ဟူသည့် အနှစ်သာရသည် ပျက်သုဉ်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပါ တကယ်တန်း အတည်ပြုကျင့်သုံးသွားမည်ဆိုလျှင် တိုင်းရင်းသား မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူ မဟုတ်သူများသည် မည် သည့်အခါတွင်မျှ နိုင်ငံသား မဖြစ်နိုင်တော့။ နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း အခြေခံသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက ချမှတ်ခဲ့ပြီး ကောင်းမွန်သောမူဖြစ်သည်။ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးများတွင်လည်း ဤ မူကို လက်ခံကျင့်သုံးလျှက်ရှိကြသည်။ ယခုဤမူကို ဖျက်လိုက်ပြီ။ သို့ဖြစ်၍ နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ရန် လမ်းကြောင်း တကြောင်းသာ ရှိတော့သည်။ မိမိတို့သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်ပါသည်ဟူသည်ကို လိုအပ်သည်ထက် ပိုမို၍ တင် သွင်းသော လှုပ်ရှားမှုများပေါ်လာမည်။ ထိုသူတို့အား မူလကပင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အာဃာတ ရှိထားသော လူမျိုးကလည်း တန်ပြန်ဆန့်ကျင်သော လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်လာမည်။ သို့ဖြစ်၍လူမျိုးရေးပဋိပက္ခများတောက်လျှောက် ဆက်ရှိနေမည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအောက်တွင် လူမျိုးရေးပဋိပက္ခများ ပိုမိုကြီးထွားလာရန်သာ ရှိသည်။
နိုင်ငံတကာဥပဒေကို လိုက်နာဖေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို တည်ဆောက်ခြင်း။
အရေးကြီးသော နောက်ထပ်ဥပဒေပြသနာတခုမှာ မိမိနိုင်ငံအနေဖြင့် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုး ထားသော နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်ကို လိုက်နာရမည့်တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ "လူ့အခွင့်အရေးကတော့ လိုက်နာနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်” ဟူ၍ ပြောရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်တော့။ "လူ့အခွင့်အရေးကို တဘက်က စဉ်းစားပေါ့။ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ထူးခြားတဲ့အခြေအနေလည်း ကြည့်ရမယ်” ဟူ၍ ဆင်ခြေပေးပြီး မိမိတိုင်းပြည်က လက်မှတ်ရေးထိုင်း အတည်ပြုထားသော နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်ကို မလိုက်နာ၍မရ။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ သဘော တူစာချုပ်နှစ်ခုကိုသာ လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုထားသည်။ တခုမှာ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ် ဖြစ်သည်။ နောက်တခုမှာ အမျိုးသမီးများအား ခွဲခြားဆက်ဆန်မှုပပျောက်ရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်ဖြစ်သည်။ ဤနှစ်ခုမျှသာ ရှိသော နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်တို့ ကို လိုက်နာဘို့ မဆောင်ရွက်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာအလယ်တွင် မည်ကဲ့သို့ မျက်နှာမော်မည်နည်း။ စစ်အစိုးရဖန်တည်း ထားသည့် လွှတ်တော်သည် ဤစာချုပ်များအား မည်ကဲ့သို့ လိုက်နာဖေါ်ဆောင်ဘို့ လိုအပ်ကြောင်း ဥပဒေကြောင်းအရ ဆွေးနွေးမှုများ ယခုအထိ မကြားရသေးပါ။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို တတွတ်တွတ် ရွတ်နေသူများသည် အဘယ်ကြောင့် မသိခြင်ယောင်ဆောင်နေပါသနည်း။ စစ်မှန်သည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံမရှိလျှင် တိုင်းပြည် မည်သည့်အခါတွင်မျှ တကယ်တန်း တည်ငြိမ်နိုင်မည် မဟုတ်သည်ကို အသိအမှတ်မပြုကြ၍လား။
ကလေးအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်ကို လိုက်နာကြောင်း ပြသည့် အနေဖြင့် စစ်အစိုးရက ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကလေးသူငယ် ဥပဒေကို ပြဌာန်းပြီး ပုဒ်မ ၃ (က) တွင်အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရသည်။
ပုဒ်မ ၃ (က) ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ကွန်ဗင်းရှင်းပါ ကလေးသူငယ်၏ အခွင့်အရေးများကို အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ရန် --------------- ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများ အနက်တရပ်မှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ဖြစ်သည်။ အများပြည်သူ နှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံ တကာ သဘောတူစာချုပ် ပုဒ်မ ၂၄(၃) တွင် ကလေးသူငယ်တိုင်းသည် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရယူခွင့် ရှိရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြဌာန်းထားသည်။ ကလေးအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ် အပုဒ် (ရ) (၂) တွင် ကလေးသူငယ် များ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရစေရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည်များက ၄င်းတို့၏ အမျိုးသားဥပဒေများနှင့် အညီ ဖေါ်ဆောင်ပေး ရမည်ဟု အတိအလင်း ပြဌာန်းထားသည်။ ဤသည်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြောင်း ပြသသည့်အနေမျိုးဖြင့် စစ်အစိုးရ ၏ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကလေးသူငယ်ဥပဒေတွင် အောက်ပါအတိုင်းပြဌာန်းထားသည်။
ပုဒ်မ(၁၀) ကလေးသူငယ်တိုင်းသည် နိုင်ငံသား ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကို တည်ဆဲဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့် အညီ ရရှိစေရမည်။
ကလေးသူငယ်ဥပဒေ အနေဖြင့် တဘက်မှ အခွင့်အရေး ပေးထားသလိုလို ပြဌာန်းထားသော်လည်း အခြားတဘက်မှ ပြန်ပိတ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တည်ဆဲဥပဒေပြဌာန်းချက်အောက်တွင် အကြုံးဝင်မှသာရရှိမည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကလေးသူငယ်များသည် တည်ဆဲဖြစ်သော ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအောက်တွင် နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့် မရကြပါ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်လာပြိးနောက် ပိုဆိုးသွားပါသည်။ သို့ ဖြစ်၍ ကုလသမဂ္ဂ ကလေး အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်ပါ ကလေးအခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ခံစားစေရန် စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က ပြဌာန်းလာခဲ့သော ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ၊ ၁၉၉၃ ကလေးသူငယ်ဥပဒေ နှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတို့အားပြင်ရန် မုချလိုအပ်ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ကာလ က ဖြစ်ရပ်များကို ဘာကြောင့် ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ဘို့ လိုအပ်သလဲ။
ဇူလိုင် လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် အယ်လ်ဂျာဇီးရားက ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခန်းတွင် ကုလသမဂ္ဂမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ် တဦးလည်းပါဝင်ခဲ့သည်။ အမည် မမှတ်မိတော့ပါ။ ၄င်းက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ မွတ်ဆလင် ဘာ သာဝင် ဦးရေ ရှစ်သိန်းခန့်ရှိကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ဘီဘီစီ ဆွေးနွေးခန်း၌ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်၏ ရှုတ်ထွေးမှုများကြောင့် မပြည့်စံနိုင်ဘဲ မည်သည့်အဆင့်အတန်းမှ မရရှိသူပေါင်း များစွာ ရှိနေ ကြောင်း မိမိက ထောက်ပြသောအခါ ဦးဘရှိန်က မပြည့်စုံတဲ့လူတွေ မိမိတို့ဆီဘာကြောင့် ရောက်လာသလဲဟု ပြန် လည် မေးမြန်းပါသည်။ စာရေးသူလည်း မဖြေနိုင်ပါ။ ဦးဘရှိန်ဆိုလိုချက်အရ ထိုသူများသည် မူလက ထဲက မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်း အစဉ်တစိုက်အခြေချ နေထိုင်နေသူများ မဟုတ် နိုင်ငံပြင်ပမှ (အတိအကျအားဖြင့်) ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ၀င်လာကြသူများဟု ဆိုလိုကြောင်း နားလည်ပါသည်။
စင်စစ်အားဖြင့်မူ ဦးဘရှိန်သည် စစ်အစိုးရ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတဦးဖြစ်သဖြင့် လွှတ်တော်အတွင်းမေးမြန်း လျှင် ပို၍ အကျိုးရှိနိုင်ပါမည်။ ဖြေရန် တာဝန်အရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်မှာ သမတ တာဝန်ယူထားသူ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးသိန်းစိန်ဖြစ်သည်။ ဦးသိန်းစိန်သည် စိုင်းမောက်ခမ်းနှင့် မတူပါ။ လူသစ်မဟုတ်ပါ။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စစ်တပ်အာဏာ သိမ်း ပြီးနောက် န၀တ နအဖ ခေတ် တလျှောက် လုံး ဗိုလ်ချုပ်တဦးအနေဖြင့် ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းတွင် ပါဝင်လာခဲ့သူ ဖြစ် သဖြင့် ရှေ့မှီနောက်မှီဖြစ်သည်။ န၀တ နအဖ ခေတ်က သူကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပါဝင် လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုများအပေါ် ဆက် လက် တာဝန်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့အစိုးရသစ်တက်တာ အခုမှ တနှစ်ကျော်ပါသေးသည်ဟူ၍ အကြောင်းပြကာ မိမိ၏ တာဝန်ရှိမှုကို ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်ခြင်းမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။ လူသစ်ကလေး လိုလို၊ ဘာမှ မသိသေးသလိုလို မျက်နှာ အနေအထားမျိုးဖြင့် လူထုကို မချည်းကပ်သင့်ပါ။ စစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော်လည်း တာဝန်သိသော၊ တာဝန်ယူရဲသော၊ လုပ်ရဲရင် ခံရဲသည့် သတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသော ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ကြောင်း ပြသင့်ပါသည်။
ဦးသိန်းစိန် အနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းခေတ် အထိ ပြန်သွားပြီး တာဝန်ခံ၇န်တော့ မလိုပါ။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ဝင်လာသူများ မည်သည့်နှစ်တွင် ဦးရေမည်မျှဝင်လာ သည်၊ မည်သည့်လမ်းကြောင်း မှ ၀င်လာသည်၊ မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ၀င်လာသည်၊ ထိုသူများအနက် ယခုအချိန်၌် ဦးရေမည်မျှသည် နိုင်ငံသားများ ဖြစ်နေကြပြီ။ ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ တို့၏ ဦးရေမှာ မည်မျှရှိသည်။ မည်သည့် အဆင့်မှ မရသူဦးရေမှာ မည်မျှဖြစ်ပြီး ဘာကြောင့် ဤသို့ မရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေးဦးရေ စုစုပေါင်း မည်မျှ ရှိပြီး ကလေးအခွင့်အရေးအရနိုင်ငံ သားခံစားခွင့်ရပြီးသူပေါင်း မည်မျှရှိပြီ --- အစရှိသဖြင့် တနိုင်ငံလုံးသိ ဖြေကြား၇န် တာဝန်ရှိသည်။ သို့ မှသာ လူထု တရပ်လုံးလိုက်ပါ စဉ်းစားနိုင်ပြီး ၀ိုင်းဝန်း အဖြေရှာနိုင်ကြပါမည်။ အနာဟောင်းများကို ဖေါ်ထုတ်ကုစားခြင်းမပြုဘဲ အပေါ်ယံ ဆီမန်းလောက်မျှဖြင့် ကုသနေလျှင် မိမိတို့ နိုင်ငံသည် ကျမ္မာရေးကောင်းမွန်သည့် နိုင်ငံမည်သည့်အခါတွင်မျှ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယဉ်ကျေးမှုတရပ်သဘွယ်ဖြစ်မသွားမီ အတိတ်ကို ဖုံးကွယ်ထားသည့် လုပ်ဟန်အား ယခုကထဲက စတင် တိုက်ဖျက်ကြဘို့ လိုပါပြီ။
ရိုဟင်ဂျာပြသနာအား စစ်အာဏာရှင်စနစ်က ကျင့်သုံးလေ့ရှိသည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ဟန် အခြေခံမှ ချည်းကပ်ခြင်း
ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သည့် စစ်အစိုးရသည် နိုင်ငံလုံခြုံရေး (သို့ မဟုတ် ထိုမှ တဆင့်လျှော့၍) အမျိုးသားလုံခြုံရေး ဟူသည်ကို လူ ကြားကောင်းအောင် ကြွေးကြော်မည် ဖြစ်သော်လည်း စင်စစ်အားဖြင့်မူ စစ်အာဏာရှင်စနစ် လုံခြုံရေး အတွက် တချက်ခုတ်၊ အချက်ပေါင်းများစွာ ပြတ်အောင် လက်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ၊ ရခိုင် အဓိကရုဏ်းအား အစီအစဉ်ရှိရှိ ဖေါ် ခဲ့သည်ဟု သုံးသပ်နိုင်သည်။
(၁) စစ်အာဏာရှင်စနစ် စတင်ခဲ့သည့် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှစ၍ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းများအား ၄င်းတို့ကပင် ဖန်တည်းပြီး လူထုထောက်ခံမှုရအောင် လုပ်ခဲ့သည့် သမိုင်းဖြစ်ရပ်များစွာ ရှိခဲ့သည်။ ယခုဖြစ်ရပ်တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာ များအား တတိယနိုင်ငံထွက်အောင် ကုလသမဂ္ဂက စီစဉ်ပေးနိုင်လျှင် အစိုးရက ကူညီပါမည်ဟု ဦးသိန်းစိန်က ထုတ်ပြန် ကြေငြာလိုက်သည့် အချိန်တွင် ငါတို့ချစ်တဲ့ သမတကြီး ဟူသော အသံများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
(၃) အရေးအကြောင်းဖြစ်လာလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် လည်းကောင်း လူထုအနေဖြင့် မည်သို့မျှ အားကိုး၍ မရ။ တပ်မတော်ကို သာ အားကိုးရသည်ဟု လူထုကို အယုံသွင်း လိုသည်။
(၄) ပြီးခဲ့သည့် လတချို့ က ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ နဲ့ရခိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ခေါင်းဆောင်များ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သွားရောက်သောအခါ ရခိုင်လူထု ထောင်ပေါင်းများစွာက သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုခဲ့ကြသည် ဟု သိရသည်။ ဤသို့သော အခြေအနေမျိုးကို စစ်အာဏာရှင်များက လုံးဝ ကြိုက်နှစ်သက်လေ့မရှိပါ။ ရခိုင်လူထုကို ပညာပေးဘို့ လိုပြီဟု သုံးသပ်ပုံရသည်။ ယခုမူ ရခိုင် လူထု ၏ ခြေထောက်ကို ရိုက်ချိုးလိုက်နိုင်ပြီ ဟု ဆိုနိုင်သည်။ စစ်တပ်ကို အားကိုးနေရသည့် ဘ၀သို့ သက်ဆင်းသွားပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာ ရခိုင် အဓိကကရုဏ်းအား ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ လူထုအားလုံး ငြိမ်းချမ်း၊ လုံခြုံ၊ အင်အား ပြည့်စုံစွာ ရပ်တည်နိုင်ခြင်း မရှိလျှင် ပြည်ထောင်စု အတွင်းရှိ အခြားတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူထု အားလုံးပါ အင်အားချည့်နဲ့ နေပါမည်။ နောက်ထပ် တရုပ် ဗမာ အေ၇းအခင်း ပါ ဖန်တည်းခြင်းခံရပါက စစ်တပ် က ကိုင်မြှောက်ထားသော သေနတ်အောက်၌ အရိပ်အာဝါသ ခိုပြီး အသက်ရှင်ရသည့် ဘ၀သို့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူထုကြီး တရပ်လုံးကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာ ရခိုင် အဓိကကရုဏ်းအား ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုသည့်အနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွား၇န် အကြံပြုပါသည်။
(က) ယခုအချိန်၌ ရိုဟင်ဂျာများသည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသည့် (တနည်းအားဖြင့်) လူအဖြစ်အသက်ရှင်ခွင့် ရနိုင်သည့် အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာများပင် မရရှိဟူသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေပါသည်။ ဤသည်မှာ လုံးဝ မဖြစ်သင့် ပါ။ လူ့အခွင့်အရေးရှုဒေါင့်မှ ကြည့်လျှင် မဖြစ်သင့်သလို မေတ္တာတရားကြီးမားသည်ဟု ဂုဏ်ယူကြလေ့ရှိသော ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်များ အနေဖြင့် အမြန်ဆုံးကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်၇န် စဉ်းစားဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
(ခ) ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည် ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုများကို အားပေးရာရောက်ပါသည်။ တရားမျှတမှုကိုလည်း မျက်ကွယ်ပြု ရာရောက်သည်။ မိမိတို့အမြင်ကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ထုတ်ဖေါ်သင့်ပါသည်။ အနည်းဆုံးအားဖြင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ သမျှ အမှန်တရားများ ပေါ်ထွက်လာစေ၇န် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းသင့်ပါသည်။
(ဂ) ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သည့် အစိုးရကိုယ်တိုင်က ၀င်ရောက်ကျူးလွန်မှုကို နိုင်ငံတကာက ရက်စွဲအတိအကျဖြင့် ထောက်ပြလာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကြီး တစုံလုံးကို အစမှအဆုံး သေချာစွာဖေါ်ထုတ်ပြီး နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင် ဆောင်ရွက်နေသူများ အပါအ၀င် ဦးဆောင်ကျူးလွန်ကြသည့် တရားခံအားလုံးကို လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအေ၇ာင်၊ မရွေးဘဲ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံဖြင့် ထိရောက်စွာ ဖေါ်ထုတ်အရေးယူနိုင်မှသာ နောင်သည်လိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါမည်။
(ဃ) ပြီးခဲ့သည့် နအဖ စစ်အစိုးရအောက်၌ ကျူးလွန်ဖြစ်ပွားခဲ့သော နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိသည့် ပြစ်မှုကြီးများကို ကုလ သမဂ္ဂ က ဦးဆောင်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးစေရန် လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ အရှိန် ကောင်းစွာရခဲ့ပြီး အောင်မြင်တော့မည့်အနေအထားရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲများ လုပ်ပေးသယောင်နှင့် လမ်းကြောင်းလွှဲနိုင်ခဲ့သဖြင့် ယင်းလှုပ်ရှားမှုမှာ ယာယီ တိမ်မြှုပ်သွားခဲ့သည်။ ယခုရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ပြစ်မှုကြီးများထပ်မံကျူးလွန်နေပြန်ပါပြီ။ နိုင်ငံတကာ လူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်း ၅၈ ဖွဲ့က စုပေါင်း၍ ဤမှုခင်းကြီးအပေါ် နိုင်ငံတကာ အနေဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး လုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုလာပါပြီ။ ဤ လှုပ်ရှားမှုကို လူထုတ၇ပ်လုံး ထောက်ခံသင့်၊ ၀ိုင်းဝန်းတောင်းဆိုသင့်သည်ဟု မြင်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာအနေဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေး ဖေါ်ထုတ်ခွင့်မရပါက နောင် အလားတူပြစ်မှုကြီးများ ထပ်မံကြုံတွေ့ ဦးမည်မှာ မလွဲပါ။
26 July 2012 at 14:20
ကိုအောင်ထူးက ( ရိုဟင်ဂျာဟု ခေါ်သော လူမျိူး ) ဆိုပြီး စာလုံးနဲ့ သာ ရေးပါ - ဒီလိုဆိုရင် ဒီဆောင်းပါး ပြည့် စုံပါတယ် ။ ခုတော့ သမိုင်းလိမ် ကုလားကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အရေးအသားမျိုးရေးတော့ ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲ ဆိုတာ သိပ်သိတာပေါ့ -ဒါပေမဲ့ဘယ်သူ့ ကို အကြံပေးနေတာလဲ မသိရဘူး- ဦးသိန်းစိန်ကို အကြံပေးရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပေးပါ- စာဖတ်သူကို ဆရာကြီးလုပ်သလိုလို ဘာမှ အမိန့် ပေးမနေနဲ့ - ကုလားတွေ ခြိမ်းခြောက်နေတာကို မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကာကွယ်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ရေးဖို့ လိုတယ် ။
What ever it is, we don't care who is right or wrong.
We hate Kalar, we hate Bengali. we opposed any form of recognition to those Muslim.
we stand by president and will drive those Bengali back to sea.
I am wrong from your point of view. You are wrong from my point of view.
Love is the answer. We should not say or think without thinking for both sides. It happened because there is no rule of laws. people think they can walk away after they do bad things or kill somebody. If people are sure that there is rule of law, they don't dare to do that.
Hey.mother F**er Aung Htoo. Bring those Rohingers to your home and let see what can happen near future. If you get so sympathy, you should take care all of them.
27 July 2012 at 00:48
အခုအာသံမှာဖြစ်တဲ.ပြသနာကို india က ဘယ်လို
ဆု ထက်ပြည်သူပေးတဲ.ပြည်သူ.ဆုကိုသာ ပိုမြတ်နိုးမယ်လို.ကျတော်ထင်ပါတယ်
၁၉၉၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၇)ရက်နေ့စွဲဖြင့် ABSDF (မကဒတ)သုတေသနဌာန မှ ထုတ်ဝေသော စာမျက်နှာ ၄၉ မျက်နှာပါRohingya Researched by ABSDFဆိုသောစာတမ်းကိုမလေးအခြေစိုက်အစ္စလာမ်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဒေါ်လာတစ်သန်းကျော်နှင့်လက်နက်ခဲယမ်းများ ထောက်ပံ့ကာ ရေးသားစေခဲ့ခြင်း။
ထိုသုတေသန စာတမ်းကြောင့် ..
စီမံချက်များကြောင့်တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေသောရိုဟင်ဂျာဇာတ်လမ်းကို ၁၉၉၂ တွင် NGO များမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာနှင့် UNHCR တို့မှ သိပြီးယနေ့ထက်ထိရိုဟင်ဂျာအား မြန်မာနိုင်ငံမှ အဖိနှိပ်ခံလူမျိုးစုအဖြစ် တရားဝင်သတ်မှတ်ကာ ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ် ရောက်လာခဲ့ခြင်းကြောင့်ယခုအကျိုးဆက်များအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟု ယူဆပါသည်..။
27 July 2012 at 08:20
ယခုအကျီုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖန်တီးခဲ့သူများ ...
ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်မှအဂတိလိုက်စားခြင်းဖြင့် တာဝန်ရှိသူ အရာထမ်းများ ..
၊ INGO များ။
ABSDF သုတေသနဌာနမှ ရိုဟင်ဂျာ စာတမ်းပြုစုသူများ....
အစရှိသည်တို့အား ယနေ့ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေဆိုးများ၏ ...
ဟုတ်တယ် ကုလားတွေ ကို လက်မခံနဲ့ ၊ တို့ ဂေါတမ ဘုရား ကုလားတော့ လက်ခံပါ နော် .... ဟီး
ဒီကုလား တော့ မောင်းမထုတ်ပါနဲ့ တို့ ရှိခိုးစရာ မရှိဘဲ နေဦး မယ်
ဓာတ်ပုံထဲက ကိုမိုးသီး ပုံက မွတ်ဆလင်ကုလားနဲ့ တူတယ်
World Trade Center ဘေးက ပြိုသွားတဲ့ ဗလီကို ပြန်ဆောက်ခွင့်မပေးတော့တာ လုံခြုံရေး အကြောင်းပြချက်လို့ ဖြေထားတာ ရှိတယ်နော်... သေချာ လေ့လာပြီမှ စာကို ရေးစေချင်ပါတယ်.. တတ်ယောင်ကားရေးထားတာကို ဖတ်မိလိုက်လို့ အချိန်ကုန်သွားတာ ကို အတော် နှမျောမိတယ်.. :(
လို့ မစားရ၀ခမန်းအော်နေကြတဲ့၊လူတွေသူတို့ ကိုခေါ်ထားချင်ယင်ပြောလိုက်၊အရောက်လိုက်ပို့ ပေးမယ်။
နောက်ပြီးသူတို့ ကကမ္ဘာဖျက်တဲ့အဖွဲ့ တွေဘဲ။
ယခုနောက်ဆုံး ရရှိသော သတင်းအရ ရိုဟင်ဂျာကို လက်မခံတဲ့အတွက် ပါကစ္စတန် အခြေစိုက် တာလီဘန်အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သွားဖို့ နိုင်ငံတကာမီဒီယာကြီးတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ကြေညာခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်.. ။ ထိုင်းအခြေစိုက် အစ္စလာမ်အစွန်းရောက်များနဲ့အခြားအစွန်းရောက်အဖွဲ့အစည်းများကလည်း ဒီလို ကြေညာခဲ့ပါတယ်..။
ဒါဟာ မြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက် မကြုံဖူးတဲ့ Terrorist (အကြမ်းဖက်မှု) ဆိုတာကို အခု အစိုးရနဲ့ ပြည်သူအများရင်ဆိုင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်.။တကယ်တမ်း ပြန်လေ့လာကြည့်ရင်ဒီအခြေအနေအထိ ရောက်လာခြင်းဟာ....
(၁)ပြည်ပမီဒီယာများမှ သတင်းမှားများနှင့် ၀ိုင်းပြီးဘေးတီးပေးမှုကြောင့် နိုင်ငံတကာရှိ အစ္စလာမ် အစွန်းရောက်များက အစိုးရနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအပေါ်အထင်အမြင်လွဲမှားလာခြင်း။
(၂) ဖြစ်စဉ်အတွင်း ရောက်ရှိနေသည့်ရခိုင်ဒေသတွင်းရှိNGOအဖွဲ့အစည်းများမှအခြေအနေမှန်ကိုလျစ်လျူရှုထားကာရန်ပုံငွေတစ်ခုတည်းအတွက်ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာတို့ကိုနစ်နာသူများအဖြစ် ကမ္ဘာကို သိစေခြင်း။
(၃) နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များ အလွယ်တကူ ၀င်ထွက်နိုင်ပြီဖြစ်သောယနေ့အချိန်တွင် ပြည်တွင်းက ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အစိုးရပိုင် မီဒီယာများမှ တိကျပြတ်သားတဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်မှုများ ကမ္ဘာကို ချမပြခြင်းကြာင့်informationအမှားများကို ပြည်ပမီဒီယာများကအသာစီးယူ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်သွားနိုင်ခဲ့ခြင်း။
(၅) ပြည်ပတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှ ရိုဟင်ဂျာများအားတိုင်းရင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ရေးအတွက်အစိုးရနှင့်အတိုက်အခံတို့ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းဖြစ်စေရန်လမ်းကြောင်းပေး ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရန်ပုံငွေများ ရရှိနေခြင်။
(၆) အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူ ဘာသာရေး စိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်သော မြန်မာလူငယ်များ၏ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံဖြင့်ဆဲရေးတိုင်းထွာမှုများ၊ကြိမ်းဝမ်းသံများက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ အစ္စလာမ်အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိသွားသဖြင့် ဘာသာရေးနှင့် နွယ်သော စစ်ပွဲသဏ္ဍာန် အသွင်ယူရန် တစ်ဖက်မှ အခွင့်အရေး ရသွားခြင်း။
(၇) စစ်အစိုးရလက်ထက် အဂတိလိုက်စားမှုများနှင့် တိကျပြတ်သားသောလူဝင်မှုဥပဒေများနည်းပါးခြင်းကြောင့်လွှတ်တော်ထဲအထိဝင်ရောက်နေရာယူလာခြင်း။
ဒီကုလား တော့ မောင်းမထုတ်ပါနဲ့ တို့ ရှိခိုးစရာ မရှိဘဲ နေဦး မယ်. Who say he is Kalr?? He is from India but not Binglar Kalar, You say so all of your Kalar are eating pork?? Bcz Buddha eating pork.. You are so funny...
29 July 2012 at 04:15
Burmese historians like Khin Maung Saw have claimed that the term Rohingya has never appeared in history before 1950s. According to another historian, Dr. Maung Maung, there is no such word as Rohingya in 1824 census survey conducted by the British. Historian Aye Chan from Kanda University of International Studies noted that the term Rohingya was created by descendants of Bengalis in 1950s who migrated into Arakan during the Colonial Era. He further argued that the term cannot be found in any historical source in any language before 1950s. However, he stated that it does not mean Muslim communities have not existed in Arakan before 1824.